Ibhodi Yobungcweti Onobungcweti China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ibhodi Yobungcweti Onobungcweti - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 13 ye-Ibhodi Yobungcweti Onobungcweti)
Ubuchwepheshe OEM & ODM Umbala we-Fibre Carbon Board
Ubuchwepheshe OEM & ODM Umbala we-Fibre Carbon Board Ngokuvamile, abantu bangathanda ukusebenzisa amapuleti e-fiber carbon. Futhi singanikeza ngefreyimu yeplanethi yelayisensi ye-carbon fiber enemibala. Inkonzo ye-OEM & ODM iyatholakala. Incazelo Yomkhiqizo: Into No.:CHCF049 Indwangu: 3K Full Carbon Fibre...
Ibhodi ehlanganisiwe ye-carbon fiber composite
Ibhodi ehlanganisiwe ye-carbon fiber composite Incazelo Yomkhiqizo: I-Carbon fiber luhlobo olusha lwamandla aphezulu nezinto eziphezulu ze-fiber modulus ezinokuqukethwe okungaphezulu kwe-95% yekhabhoni. Imicu yeCarbon iyashintshashintsha futhi iqinile ngokusebenza okuhle kakhulu kwemishini. Amandla amancane komoya...
Ibhodi yokusika ye-Hobbycarbon CNC ye-carbon fiber yokusika i-Octocopter I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machined, se-carbon fiber CNC yokusika insiza kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. I-CNC Carbon Fibre ukusika kuyindlela ekhethekile yokusiza...
Carbon fiber ibhodi enesitayela esishisayo ithandwa
Carbon fiber ibhodi enesitayela esishisayo ithandwa Incazelo Yomkhiqizo: Ishidi lethu le-carbon fiber elingafaki okuqukethwe okungcolile . Usayizi wethu ojwayelekile ngu-400x500mm / 500x600mm futhi sinobukhulu be-0.5-7.0 mm
I-highquality mehendi yekhibhodi ye-fiber fiber iyathengiswa
I-highquality mehendi yekhibhodi ye-fiber fiber iyathengiswa Mayelana ne-Full Carbon Fib Sheet, inamandla futhi ilula. Ukwelashwa kwe-matte kwamakhabhoni komoya kukwenza umkhiqizo ubhalwe kakhulu. Ngaphandle kwenzuzo yobulukhuni, imicu ye-carbon nayo ayivimbi kakhulu, ilula futhi ipholile. Imvamisa thina ukushuba...
I-Epoxy resin G10 sheet eliqinisiwe ingilazi / ibhodi Incazelo Yomkhiqizo Ishidi le-fiber ye-G10 Glass linezimpawu zamandla aphezulu, izakhiwo ezinhle kakhulu zikagesi nokumelana kwamakhemikhali hhayi kuphela emazingeni okushisa asekamelweni kuphela kepha futhi ngaphansi kwezimo ezinomswakama noma zomswakama. Ishidi...
Ibhodi Yobungcweti Onobungcweti IBhodi Yobungcweti Onobungcweti Izingcweti Ezenziwe Ngobuchwepheshe Ubungcweti Rc Anodized Aluminium Screw Ishidi Le-Fibbon Elicwengekile Ikhibhodi ye-Aluminium Round eyenziwe ngokwezifiso Ibhodi Yezinhlanganisela eziphansi Isithonjana Sokugcotshwa Kwesigcawu